कोरोना भाइरस, नांगिएको आधुनिक चिकित्सा पद्धति र सम्भावित तेस्रो लहर « AayoMail
2021,24 June, 7:10 pm
चीनको वुहान सहरबाट उत्पत्ति भई संसारभर तहल्का पिटेको कोरोना भाइरस आफ्ना नयाँ–नयाँ संस्करणका साथ दिनहुँ ताण्डव मच्चाइरहेको छ।
प्रारम्भमा २०१९ नोबेल कोरोना भाइरसका नामले चिनिएको यस ‘चिनियाँ’ भाइरस पछि गएर कोभिड १९ B.1.617 of SARS-CoV-2 का नामले चिनियो।
अब एक क्षण चार्ल्स डार्विनलाई सम्झिँदै उनले भनेको ‘नेचुरल सेलेक्शन(सेलेक्शन अफ स्पेसीज’ सम्झौं। यदि चीनमा देखिएको कोरोना भाइरस म्यूटेन्ट भएर नयाँ नयाँ स्वरुपमा फेर्न सक्षम नभएको भए इतिहासका पानामा दर्ज भईसक्ने थियो। तर यसो भएन, यस भाइरसले ‘सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट’ को चरणमा आफूलाई कुशलताका साथ ढाल्यो।
भर्खरै तपाईंले सुन्नु भएको डेल्टा प्लस भेरिएन्ट (AY १, B.१.६१७.२.१) २०१९ को कोभिड १९ को ‘लेटेस्ट’ परिमार्जित स्वरुप हो। यो भर्खरै भारत, नेपाल लगायतका देशमा आतंक र विनाशको उपद्रो गर्ने डेल्टा भेरिएन्ट (B.१.६१७.२) को अझ उन्नत प्रकार हो। चीनको वुहानबाट संसारभर फैलिएको कोभिड १९ (B.1.617 of SARS-CoV-2) आफूलाई परिमार्जित गर्दै यूकेमा अल्फा भेरिएन्ट ९द्य।१।१।७०, दक्षिण अफ्रिकामा बीटा भेरिएन्ट (B.१.१.७), ब्राजीलमा गामा भेरिएन्ट (P1) र भारतमा डेल्टा भेरिएन्ट (B.१.६१७.२) बन्यो।
यी सबै भेरिएन्ट कोभिड १९ को तुलनामा धेरै घातक साबित भए। नेपालको मात्रै कुरा गर्दा पनि कोभिड १९ का नयाँ भेरिएन्टको घातकता बुझ्न सकिन्छ। कोभिड १९ ले एक वर्षको अवधिमा नेपालमा झण्डै ३ हजार व्यक्तिको ज्यान गयो तर अल्फा र डेल्टा भेरिएन्टले गत दुइ महिनामा झण्डै ६ हजार व्यक्तिले ज्यान गुमाए। कहाँ एक वर्षमा तीन हजार र कहाँ २ महिनामा ६ हजार !
गत वर्ष २०२० को प्रारम्भिक महिनामा कोभिड १९ बाट संक्रमित व्यक्तिका लागि हाइड्रो क्सीक्लोरोक्वीनको प्रयोग गरियो। यो औषधिको कालोबजारी नै सुरु भयो। पछि थाहा भयो यो कोरोना संक्रमणमा काम लाग्ने कुरा होइन। प्लाज्माथेरापीको प्रचलन आयो, गयो। भिटामिन सी, भिटामिन डी, ज़िंक ट्याब्लेट, सिटामोलकै हाहाकार हुने स्थिति पनि देख्नु पर्‍यो। पछि विश्व स्वास्थ्य संगठनको फरमान आयो– यी संक्रमणविरुद्ध काम लाग्ने कुरा होइनन्। एजिथ्रोमाइसिन, स्टेराइड घर घरमा थुप्रिए।
रेमेडिसीभीरले कमाउनसम्म कमाएपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले भन्यो यो कोरोना संक्रमणविरुद्ध प्रभावी होइन। सायद भारतको मध्यप्रदेश राज्यमा नक्क्ली रेमेडिसीभीरको बिगबिगी नभएको भए यसको व्यापार चलिरहन्थ्यो। नक्कली रेमेडिसीभीरले सक्कलीभन्दा बढी प्रभाव पारेको थाहा हुन आएपछि लाजैले रेमेडिसीभीरबारे विश्व स्वास्थ्य संगठनले बोल्नु पर्‍यो। आजको मितिमा कोरोना संक्रमणका विरुद्ध आधुनिक अस्पतालमा कुनै पनि औषधि छैन। विश्व स्वास्थ्य संगठनको गाइडलाइन पालन गर्ने हो भने कुनै पनि आधुनिकभन्दा आधुनिक अस्पतालले कोरोना संक्रमितलाई सिटामोलबाहेक कुनै पनि औषधि दिन मिल्दैन। के कोरोना संक्रमितले दैनिक पचासौं हजार तिर्नुपर्ने अस्पतालमा सिटामोल खान जाने हो?
न्यूक्लिक एसिड र जैवजगतको मध्य रहस्यमय कडीका रूपमा रहिआएका छन् भाइरस। भाइरस जीवित संरचना होइन, फगत पदार्थ पनि होइन, यो दुवै हो। ‘होस्ट सेल’ मा नपुगेसम्म यो फगत न्यूक्लिक एसिड ‘आरएनए’ हो। तर ‘एपीथिलियल’ कोशिकामा आश्रय पाएपछि यो जैव जगतको सदस्य हुन पुग्छ।
डार्विनले भनेका थिए-कुनै पनि जीवलाई विकास गर्न उसको मार्गमा चुनौती आउनु पर्छ। यी चुनौतीको मुकाबिला गर्न त्यस जीवले आफूलाई थप शक्तिशाली बनाउँदै लाने गर्छ। जसले आफूलाई चुनौतीको सामना गर्न सक्षम बनाउदैन त्यो लोप हुन्छ। कोरोना भाइरस लोप भएन, नयाँ–नयाँ प्रारूपमा अझै खतरनाक भएर देखा पर्‍यो। अर्थात् आफूलाई यसले सक्षम बनाउदै आयो। कसैले प्रश्न गर्दैन(के हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीनदेखि ऐस्टेरोइड हुँदै रेमेडिसीभीरसम्मको प्रयोगले कोरोनालाई यी सबैको प्रतिकार गर्दै चाँडो आफूलाई अझ खतरनाक रूपमा आउने अवसर प्राप्त भएको हो?
यसको जवाफ अहिले नै प्राप्त हुन गाह्रो छ। कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्स) को अझ उन्नत संस्करणको चरणमा प्रवेश गरेपछि विज्ञानले यसको जवाफ प्राप्त गर्नेछ तर यसका लागि कम्तीमा अझै २० वर्ष पर्खिनु पर्ने हुन्छ।
कोभिड १९ भाइरस संस्करणका लागि बनेका सबै भ्याक्सिन कोरोनाका नयाँ अवतारका लागि केही काम लाग्दैनन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई पनि यो कुरा राम्ररी थाहा छ। तर उसले यस सम्बन्धमा स्पष्ट केही भन्दैन।
नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार नेपालमा कोरोना भाइरसको नयाँ अवतार (भेरिएन्ट) डेल्टा प्लसका ९ वटा केस देखिएका छन। भारतमा पछिल्लो जानकारी अनुसार डेल्टा प्लसका २२ वटा केस देखिएका छन। यसका अतिरिक्त भाइरसको यो प्रारूप
अमेरिका, ब्रिटेन, पोर्चुगल, स्वीट्जरल्याण्ड, चीन, रूस र जापानमा पुगिसकेको छ।
अचम्म त के भने नेपाल सरकारले डेल्टा प्लसका ९ वटा केस भेटिएको जानकारी दियो तर यो कहाँ कुन संक्रमितमा, त्यस संक्रमितको अवस्था के कस्तो बारे केही जानकारी दिएको छैन।
सरकारले यसबारे अविलम्ब विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराउनु पर्छ। यो भेरिएन्ट अहिलेसम्मको सबैभन्दा घातक भेरिएन्ट हुने अनुमान किन पनि गरिँदैछ भने यो भेरिएन्ट डेल्टा भेरिएन्टमा भएको k417n म्यूटेशनका फलस्वरूप बनेको हो। दक्षिण अफ्रिकामा भेटिएको बीटा भेरिएन्टको स्पाइक प्रोटीनमा पनि यही k417n म्यूटेशनले त्यसलाई घातक बनाएको थियो। डेल्टा प्लसमा डेल्टा भेरिएन्टको घातकता त छँदैछ अझ त्यसमाथि बीटा भेरिएन्टको k417n म्यूटेशन थपिएर यो झनै घातक भएको छ। दक्षिण अफ्रिकाको भेरिएन्ट भ्याक्सिनलाई छल्न सक्षम रहेको कुरा प्रकाशमा आईसकेको छ।
नेपाली कांग्रेस आफ्नो महाधिवेसनमा मस्त छ। माओवादी र विद्रोही एमाले केपी ओलीलाई पछार्न व्यस्त छन्। ओलीजी जसरी भए पनि आफ्नो कुर्सी टिकाउन अभिशप्त छन्। न्यायलय यही मौकामा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न लिप्त छ। तपाईं हामी सबै जना दुइ महीने लकडाउनको पीडा व्यथा बिर्सिन प्रयासरत छौं। डेल्टा प्लसलाई यस्तो सुन्दर क्रीडाभूमि अन्यत्र कतै पाईदैन। डेल्टा प्लस यदि ‘डेल्टा कर्भ’ मै आकाशियो भने अरु त केही नभनौ नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन भने पर धकेलिने छ जसको प्रत्यक्ष लाभ शेरबहादुर देउवाजीलाई नै प्राप्त हुन्छ।
सबै नेपालीले सचेत भए हुन्छ कोरोनाको तेस्रो लहरले देशमा प्रवेश गरिसकेको छ। आज बिहान ६ बजेर ३० मिनेटमा गुरु मैनाली कोरोना संक्रमणसँग परास्त भएको खबर पाएँ। उहाँसँग कोरोनालाई लिएर अनेकौ पटक लामो लामो परिचर्चा भएको स्मरण गर्नुबाहेक अन्य केही बाँकी छैन मसँग! तर उहाँको भाइ मेरो आदरणीय दाई रघु मैनालीसँग भने जीवनभरि नमेटिने गुनासो हुने भयो मसँग। काश १ उहाँले गुरूजीलाई भएको संक्रमणबारे मलाई सूचित गरेको भए ११ काश, आयुर्वेदलाई पनि विश्वास गरिदिएको भए!!!